အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီချမ်း ရဲ့ ၀ါသနာများ (တက်ခ်ပိုစ့်)
Dayavej A May 13, 2009 at 11:59 PM
အမှတ်စဉ် (၂) ကတော့တော်တော် အာဘီထရိတ်တင်းဖြစ်နေတယ်။ ရေကူးတာလား။ လျမ်းတာလား။ ယာက IQ မမြင့်တော့ မစဉ်းစားတတ်ဘူးကွယ်။
သီဟသစ် May 14, 2009 at 12:11 AM
တီချမ်းတို့များ idea ကောင်းပါ့
10 က ဘာကြီးတုန်း ကျန်တာ တွေက သူ့ဟာနဲ့သူရှင်းနေတာ..
မဆုမွန် May 14, 2009 at 12:27 AM
အမှတ်စဉ် ၇က ဘာကြီးတုန်း ကျောက်စိမ်းအဆောင်လားဟေ တီကတော့နော် ဘန်ကောက်မှာ ပူလို့ဖြစ်မယ် မြွေသိုင်းကျင့်နေတယ် ကြည့်ဦး အဲ့တာကြောင့်ဖြစ်မယ် ညနေက ဘန်ကောက်မှာ မိုးတွေခြိမ်းနေတာ.
reenoemann May 14, 2009 at 12:34 AM
တီချမ်းဆီမှာ ခုမှ မန့်ဖူးတာပါ။
၉)နားထောင်ခြင်း နှင့် ကခုန်ခြင်း
ဖိုးစိန် May 14, 2009 at 4:59 AM
ဝါသနာ ၄ ၅ ၈ ကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်
EEK May 14, 2009 at 5:50 AM
Oh ... this isa18+++ post.
We must check the IDs of visitors before reading this post. :P
မိုးခါး May 14, 2009 at 7:09 AM
၁။ စာရေး၊ သီချင်းနားထောင်၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ခံခြင်း
၃။ ကလေးထိန်း (ဒါရောဂါပြန်ထတာတဲ့ :P)
၄။ ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း
၇။ အဲဒါတော့ ဘာကြီးလဲမသိဘူး .. သေချာလဲမကြည့်ရဲဘူး .. :P
၈။ စာအုပ်ဖတ်တာနဲ့ စာအုပ်စုတာလားသိဘူး .. :D
၉။ ဒွန့်တာ ဒွန့်တာ .. :D
၁၀။ ခရီးထွက်ရင်း ရှုခင်းပုံ ဓါတ်ပုံရိုက်တာလား သိဘူး ..
ဟုတ်လား .. မှန်လား .. ပြောဦးနော် တီ .. :D
ကြယ်ဖြူစင် May 14, 2009 at 9:59 AM
၁၀။ ခရီးထွက်ရင်လက်ကအငြိမ်မနေနိုင်လို့..ကင်မရာလေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တာ..
sweetpeony May 14, 2009 at 11:01 AM
၂) ရေကူးခြင်း၊ ဒိုင်ပင်ထိုးခြင်း
၄) ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ကြိုက်သောရုပ်ရှင်များကိုစုဆောင်းခြင်း
၉) သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း
ဦးနှောက်က အလုပ်လုပ်ရလို့ဗိုက်ဆာလာပြီ။
wai May 14, 2009 at 11:34 AM
For No. (3) Plz contact with Angelina Jolie.
one night stand May 14, 2009 at 11:42 AM
၁။ စာရေး၊ သီချင်းနားထောင်၊ ပါးစပ်ဖြဲ၍ ဓါတ်ပုံ အ၇ိုက်ခံခြင်း
၂။ ရေကူး ချင်ယောင်ဆောင် ရင်း လိုအပ်သည်များကို ရှာဖွေ စားသောက်ခြင်း
၃။ ကလေးလိုချင်တဲ့ ရောဂါ (ခုတလော ဒီရော ဂါတော်တော်ဖြစ်တာ ၊ ၀က်တုတ်ကွေးနဲ့ အပြိုင်ဘဲ)
၄။ ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း( ဒရမ်မာ နဲ့ သရဲကား နဲ့အသက်အရွယ်တိုင်း ကြည့်လို့ မရတဲ့ကားတွေ)
၅။ တောင်ပြေးလိုက် မြောက်ပြေးလိုက် ဟိုပြေးဒီပြေး ခရီးထွက်ခြင်း (ရှင် သွားခြင်တဲ့နေရာလေးတွေလေ ... မသေခင် ဒို့ တွေလည်း ရောက်အောင် သွားလိုက်ပါအုံးမယ်။)
၆။ ပုံတူလေးတွေကို ဆွဲတာလေ ။
၇။ အနုပညာကို ခနွာ လှစ်ဟကာ ကြည့်သူများသရိုးသရီဖြစ်အောင် ဖော်ပြခြင်း ( ကိုယ်ခန္ဒာကို လူအများအား ပြ ပြီး အလှူပြုခြင်း)
၈။ စာအုပ်တွေလေ စာအုပ်တွေကို အဟောင်းဆိုင်ကရော အသစ်ဆိုင်ကပါ ၀ယ်ပြီး စုတဲ့ အကျင့်
၉။ အစက ရှင့်မှာ ဒီ အဒွန့် ဒန့်ဒန့်ရောဂါ သိပ်မကြီးသေးပါဘူး ။ ခုတော့ ကိုယ့်ဟာကို နားမှာ တပ်ပြီး တော်တော် ဒန့် ဖြစ်နေပြီပေါ့လေ ... အင်းပေါ့လေ ဘိုလို လုံးလီး ဖြစ်လို့တစ်ယောက်တည်း ဒန့် တာနေမှာပါ။
၁၀။ ရှုခင်းပုံ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ
ကဲ မုန့် ကြွေးတော့ ။ ကျမဖြေပြီးပြီ
Mogok Thar May 14, 2009 at 1:39 PM
အချက်အပြုတ်က ၀ါသနာထဲ မထည့်ထားဘူးလားဗျ
သဇင်ဏီ May 14, 2009 at 3:12 PM
အမှတ်စဉ် ၃.. ကလေးပုံတွေဆိုတော့..
ကလေးမွေးတာ ၀ါသနာပါတာလားတီတီ... ဟီး :D
ကဲ ချစ်တီရေ ... မိရောင်တို့ စတင်ရွှီးပါမယ်နော့်။
၁) စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် သီချင်းနားထောင်ရင်း စာရေးရတာကို ၀ါသနာပါတယ်။
၄) ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အပန်းဖြေတဲ့ဝါသနာ
၆) ပန်းချီဆွဲတဲ့ ၀ါသနာ
၇) စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ အိပ်စက်အနားယူတဲ့ ၀ါသနာ
၈) အချိန်ရရင် ရသလို စာဖတ်တတ်တဲ့ ၀ါသနာ
၉) သီချင်းနားထောင်ရင်း ကခုန်ရတဲ့ ၀ါသနာ
၁၀) အပျော်တမ်း ဓါတ်ပုံရိုက်တတ်တဲ့ ၀ါသနာ
ကဲ ချစ်တီရေ... မိရောင်တော့ ရေးပြီးပြီနော်။ မှန်မမှန်တော့ တီဆုံးဖြတ်တော့။ တူအရီးနှစ်ယောက်က အမြဲတမ်း ရှေ့သွားနောက်လိုက် ညီတတ်တယ်လေ။ တီ့ဝါသနာတွေကို မှန်းတာရော ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက် မှန်မမှန် ပြန်ပြောပါနော်။
mgnge May 14, 2009 at 5:48 PM
သူများပြောသလို တီ့ဝါသနာကို ပြောပြရမှာလား...။
ဒါမှမဟုတ် သူများပြောထားတာကို ကော်ပီလုပ်ရမှာလား
Rita May 14, 2009 at 8:03 PM
အကုန်ဖြေပြီးကုန်ကြပြီ ဆိုတော့ ကိုယ်သက်သာသွားတာပေါ့။
ဒါနဲ့ အမေးနွားကျောင်း အဖြေဘုရားလောင်းတဲ့... ဟုတ်လားဟင်
နွေးနေခြည် May 17, 2009 at 6:07 PM